Rimwe zuva harisi zuva revhiki, naSol Aguirre. | Zvazvino Zvinyorwa
Rimwe zuva harisi zuva revhiki, naSol Aguirre.
Diana Millan | | Mabhuku, Novela
Sol Aguirre anopa bhuku rake "Rimwe zuva harisi zuva revhiki." Sol ndiye musiki weimwe yeakanakisa kuseka mablog evakadzi, Vanochenesa Treble. Ipo munyori akakwanisa kutiita kuseka nekuseka nechero chinyorwa chaitumirwa nguva nenguva pawebhusaiti yake, aive nechishamiso chakatichengetera, kuburitswa kwebhuku rake rekutanga.
Na "Rimwe zuva harisi zuva revhiki," Aguirre anokwanisa kutiita kunyemwerera peji nepeji.
«Zita rangu ndinonzi Sofía Miranda uye ini handibatanidzi vhudzi rangu, ndine runyoro runotyisa, ndinotaura mazwi mazhinji akashata, ndinovenga kubika, ndinoona mabhaisikopo anotyisa andinoda, ndine cellulite uye kugadzikana mumaoko angu izvo chikara chaizvo. Ndiri amai vasina murume, vokurera uye vaviri amai. Chandinoziva ndechekuti ndinoda kurarama ndisina shangu kwenguva yakareba sezvinobvira (tsoka dzangu dzisina shangu uye pfungwa dzangu dzisina shangu) uye kuti rimwe zuva harisi zuva revhiki, saka zvirinani kuti ndisarudze IZVOZVI ». Aya ndiwo maratidziro atinoita Sol kune protagonist yake.
Sofía Miranda mutori venhau anogara muMadrid, amai vasina murume vevana vaviri uye anodanana neNew York. Mushure mekufamba kuenda kuguta risingamborara, Sofia anotanga kutsvaga nzira yake yekumufaro. Mukati megore regore isu tinokuperekedza iwe munzira yako kuenda pachiyero chaunoda uye chakakodzera zvakanyanya.
Hatizive kusvika padanho rekuti runyorwa rwacho nderwehupenyu, izvo zviri pachena kuti Sofia anotidzidzisa chidzidzo. Kutsvaga kurota kwedu uye kuva nerunyararo nesu pachedu hazvigoneke. Zvakaoma asi hazvigoneke. Muenzaniso wekusimba, kutsungirira uye kushinga kutarisana nekutya uye zvipingamupinyi zvatinofanira kusangana nazvo muhupenyu hwedu.
Sol anokwanisa kuburitsa chidzidzo ichi zvichibva pakuseka, kuzvivimba uye nenzira chaiyo. Chimwe chezvinhu zvakanakisa pamusoro pebhuku ndechekuti, neimwe nzira kana imwe, tinogona kuziva nem protagonist muzvinhu zvakasiyana; nekuti mushure mezvose, Sofía, akafanana nemumwe wedu, nezvakanaka nezvakaipa zvake.
Bhuku rinokurudzirwa zvakanyanya kana iwe uri munguva yekuchinja uye warasika zvishoma. Nzira iyo munyori anosvika nayo kumusoro kunounza kunzwa kwekufara uye tariro. Chinhu icho munguva dzino chinopfuura kudikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Rimwe zuva harisi zuva revhiki, naSol Aguirre.
'Convénzeme', chirongwa chekunyora chakapihwa naMercedes Milá
_Bhuku rehuni_. Iyo Yekupedzisira Inoshamisa Nordic Bestseller